पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा शनिबार सम्पन्न महिलाको पाठेघर तथा स्तन उपचार शिविरमा २०० भन्दा बढीको परीक्षण गरिएको छ । Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेकपामा माधव नेपाल समूह हाबी
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा ख्यातिप्राप्त साहित्यकार
काठमाडौं । नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै छ । वीपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस र उसका भ्रातृ संगठनले विभ
दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित कटुवा खोला किनारमा सिँचाइका लागि निर्माण गरिएको पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर तीन किशोरीको मृत्यु भएको छ । आइतबार साँझ ७ः४५ बजेतिर पोखरीमा नुहाउने क्रममा घ
दुई आक्रमणमा ८ पाकिस्तानीको मृत्यु, ३० जना सख्त घाइते
एजेन्सी । दक्षिण पश्चिमी एसियाली मुलुक पाकिस्तानको उत्तरपूर्वी शहर डेरा स्माइली खानमा भएको दुई आक्रमणमा परि ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० भन्दा बढी व्यक्ति सख्त घाइते भएका छन् । आइतबार बिहान मोटरसाइकल
खेलकुद जीवनको अभिन्न अंग जस्तै हो । स्वस्थ जीवनका लागि खेलकुदको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । खेलले समाजमा विभिन्न द्धन्द्धहरु अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । पेलेले फुट
बेलायत-इरान तेल ट्यांकर विवादमा भारत पनि मुछियो !
एजेन्सी । इरानले गत शुक्रबार कब्जामा लिएको बेलायतको स्टेला इम्पेरो नामको बेलायती तेल ट्यांकरको चालक दलका २३ सदस्यमा १८ जना भारतीय नागरिक भएको बताइएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रभीसकुमारले
काठमाडौं । नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै छ । वीपी स्मृति दिवसक
काठमाडौं । नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री
बटुवाहरु : करिब एक सेकेन्डमा ३ जना , १ घन्टामा ३...
एजेन्सी । दुनियाँको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीबाट बिल गेट्स बाहिरिएका छन् । विश्वमा धनी व्यक्तिको सूचीमा सन् १९८५ देखि एकलौटी सर्वोच्च स्थान जमाउँदै...
एजेन्सी । इजिप्टमा शुक्रबार राती सम्पन्न भएको अन्तिम खेलमा सेनेगललाई १-० गोल अन्तरले हराउँदै अल्जेरिया अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको च्याम्पियन बनेको छ । य...
काठमाडौ‌ ।बिजि बर्मा फिल्मिसको ब्यानरमा कला राई को प्रस्तुतीमा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र काँचुली को दोश्रो गीत मुस्काएर अलि अलि सार्वजनिक भएको छ । ...
काठमाडौं । बेल अर्थात् श्रीवृक्ष भगवान शिवको प्रिय वनस्पति हो । शिवको पूजा गर्दा बेलको पात अर्थात बेल पत्र अनिवार्य चाहिने गर्छ । तीन जन्मको पाप नाश ग...
जानी राखौं बिरे नुनका फाइदाहरू !
एजेन्सी । तीन दिने अमेरिका भ्रमणमा गएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान वासिङ्गटन डिसी स्थित पाकिस्तानी एम्बेसीमा पुगेको पाकिस्तानी सरकारले एक ट्व...
“न्युरालिङ्क”को अनौठा योजना: ब्लुटुथबाट दिमाग ह्याक गर्न सकिने !
एजेन्सी । इरानले गत शुक्रबार कब्जामा लिएको बेलायतको स्टेला इम्पेरो नामको बेलायती तेल ट्यांकरको चालक दलका २३ सदस्यमा १८ जना भारतीय नागरिक भएको बताइएको...
नेकपा सचिवालयले टुंग्यायो जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज ... See MoreSee Less
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुग्गो लगाएको ...
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान वासिङ्गटन डिसीमा ... See MoreSee Less
एजेन्सी । तीन दिने अमेरिका भ्रमणमा गएका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान वासिङ्गटन डिसी स्थित पाकिस्तानी एम...
नेकपा सचिवालय बैठक शुरु ... See MoreSee Less
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक बालुवाटारमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवा...
कांग्रेसले सात प्रदेशका १२ स्थानमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने ... See MoreSee Less
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सातवटै प्रदेश कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने भएको छ । कांग्रेसले...
चलचित्र काँचुली को दोस्रो गीत मुस्काएर अलि अलि सार्वजनिक ... See MoreSee Less
काठमाडौ‌ ।बिजि बर्मा फिल्मिसको ब्यानरमा कला राई को प्रस्तुतीमा रहेको नेपाली कथानक चलचित्र काँचुली को दोश्रो गी.....